Project K - We Do for Fans! Project K’s Special K-Culture Experience
Dec. 1st, 2020.
Myanmar boy band Project K, they had an outstanding Korean Culture Experience.
Project K has presented BTS cover dance and enjoyed Korean delivery service, chicken and beer as well.
They've also discovered various products of BrandK, the representative co-brand of Korea.
Enjoy Project K's Avatar Shopping!
🔹 About Project K 🔹
၂၀၀၉၂၅ မြန်မာ Boy Group project k
အဖွဲ့ အမည် - Project K
မြန်မာလူမျိုး ယောကျ်ားလေး အဖွဲ့
အဖွဲ့ ဦးရေ - ၇ယောက်
ဆုများ - 2016 Seoul International K-Pop Cover Dance Competition ဒုတိယဆု
ထူးခြားသော လက္ခဏာ - K-Pop ဂီတနှင့် မြန်မာ ရိုးရာ အကများကို ပေါင်းစပ် ဖျော်ဖြေမှု
တရားဝင် YOUTUBE - https://www.youtube.com/channel/UCkj7a5iZ7kAMkuoChtu5-mQ/featured
လက်ရှိ - POSCO International နှင့် ကိုရီးယားသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကော်ပိုရေးရှင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ရေနံ ကုမ္ပဏီ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင် ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီတို့၏ အကူအညီ အထောက်အပံ့ဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တစ်လခန့် Project K အဖွဲ့အား K-Pop များ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
-Seoul Land K-pop ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စုပေါင်း ဖျော်ဖြေရေးအေဂျင်စီ အကယ်ဒမီ
-Seoul Land ရဲ့ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေရေးပွဲများ၊ အခြား ပွဲတော်နှင့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ထုတ်လွှင့်မှု အတွေ့အကြုံများ ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း။
-အိုက်ဒေါ အဖွဲ့ Girls Generation ရဲ့ Taeyeon, SHINee ရဲ့ Onew ၊ EXO ရဲ့ Kai၊ iKON ရဲ့ Jinhwan၊ Mamamoo ရဲ့ MoonByul အစရှိတဲ့ K Pop စတား ရှာဖွေ ရွေးချယ်မှုမှာ ဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့ SM ဖျော်ဖြေရေးအေဂျင်စီ၏ “SM အကယ်ဒမီ” စီအီးအို Lee Sollim
- အနာဂတ် ကိုရီးယားလှိုင်း(Korean Wave) စတား မြေတောင်မြှောက်ရန် အတွက် Seoul Land နှင့် “SM အကယ်ဒမီ” စီအီးအို Lee Sollim တို့၏ အထူး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။
-အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ရေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသင်း
SM၊ YG၊ JYP၊ Loen၊ Cube၊ Big Hit ဖျော်ဖြေရေး အေဂျင်စီ အစရှိတဲ့
လက်ရှိ ဖျော်ဖြေရေးတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နည်းပြများ ပါဝင်ထားပါသည်။
-အေဂျင်စီ သင်တန်းသားများအား သင်ပေးသည့် အတိုင်း သင်ပေးသွားခြင်း၊
သင်တန်းသားနှင့် ကိုက်ညီတဲ့ နည်းပြနှင့် အတူတကွ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး ပညာရေး အစရှိသည်များကို အထူး ကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှု စနစ်များ ပါဝင်သည့် အကောင်းဆုံးသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။
63-1, Apgujeong-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
အရသာ သိပ်ရှိတဲ့ ဘီယာဆိုင်။ Sinsa-dong -Garosu-gil မှာ တည်ရှိတဲ့ ဂါရိုဆုလမ်း Red Cloud Pub မှာ အေးအေးလူလူ ဘီယာသောက်ပြီး သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် ဆိုင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
30-11, Apgujeong-ro 10-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Brand K စတိုးဆိုင်
အလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်စွမ်းအားနှင့် နည်းပညာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်း
အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန် ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လူသိနည်းကာ ရောင်းချမှုမှာ
အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ အတော်များပါသည်။
Brand K စတိုးဟာ အခက်အခဲများစွာ ရှိနေတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပေးဖို့ရန် အတွက် ပူးတွဲ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် & စျေးကွက် ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် Brand K ကျွမ်းကျင် အကြံပေးသူများနှင့် တကွ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အရည်အသွေး စသည်များ ကဏ္ဍအလိုက် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များကို တင်းကြပ်စွာ ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပြည်တွင်းသာ မက ပြည်ပ စားသူသုံးများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်သည့် အခွင့်အရေးတွေ ရရှိ ၊ စားသုံးသူဘက်မှလည်း ကမာ္ဘ့အဆင့်မီ ထုတ်ကုန်များကို တွေ့နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိနိုင်မယ့် win-win ပလက်ဖောင်းဟာ Brand K ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
309, Mokdongdong-ro, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
+82 2-6678-9311 +82 2-6678-9313